Stick ဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ
ဒီသတင်းတပတ် English American Idioms and Expressions ကဏ္ဍမှာ တုတ် (Stick) ဝေါဟာရကိုအခြေခံတဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းတချို့ ဖြစ်တဲ့ Carrot and stick, Stick to your guns နဲ့ Get the wrong end of the stick တို့ကိုတင်ပြထားပါတယ်။
(၁) Carrot and stick
Carrot (မုန်လာဥနီ) and (နှင့်)၊ stick ကို ဒီနေရာမှာ နာမ် (noun) အဖြစ်သုံးထားပြီး၊ တုတ် လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ စကားစုတခုလုံးရဲ့  အဓိပ္ပါယ်က မုန်လာဥနီ နဲ့ တုတ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးက လှည်းမောင်းသူတဦးက မုန်ဥလာနီကို အစွန်းတဖက်မှာကြိုးနဲ့ချည်ထားတဲ့တုတ်ကို လက်တဖက်က ကိုင်ပြီး သူမောင်းတဲ့လှည်းကိုဆွဲတဲ့ လားရှေ့ မှာ တန်းလန်းချပြထားခါ၊ မက်လုံးပေးပြီးမောင်းသလို၊ ကျန်လက်တဖက်ကလဲ၊ လားအနေနဲ့ လှည်းကိုမြန်မြန်ဆွဲရလေအောင် ရိုက်ဖို့ ကြိမ်တုတ်ကိုကိုင်ထားတဲ့ ရုပ်ပုံကနေ ဆင်းသက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လားကလဲ သူ့ရှေ့မှာရှိတဲ့မုန်လာဥနီကို စားချင်တဲ့ဇောနှင့် မှီလိုမှီိငြား ကြိုးစားပြေးလေ၊ ဝေးလေဖြစ်သနေသလို၊ တချိန်ထဲမှာဘဲ၊ နောက်ကကိုင်ထားတဲ့ကြိမ်နဲ့အရိုက်ခံရရင်နာမှာစိုးလို့ မတတ်သာဘဲ ပြေးရတဲ့အဖြစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို အထူးသဖြင့် နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးမှာ အသုံးများလာတာတွေ့ရပါတယ်။ မုန်လာဥနီကတော့ မက်လုံးတွေဖြစ်တဲ့ ငွေကြေးအထောက်အပန့် ပေးဖို့၊ အခွန်တွေ လျှော့ချဖို့ စသဖြင့်တို့ဖြစ်ပြီး၊ တုတ်ကတော့ လက်နက်အင်အားသုံးတာ၊ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ မှုတွေ ချမှတ်တာ စသဖြင့်ကို ရည်ညွှန်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာမှာ ခြောက်တလှဲ့ချော့တခါ၊ မီးစတဘက် ရေမှုတ်တဘက် ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားတွေနဲ့ တူတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်က တခုခု ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ဆုပေးဒဏ်ပေးစနစ်ကို ကျင့်သုံးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနှင့်ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
The carrot and stick approach applied by the factory owners to motivate the workers is getting good results!
လုပ်ငန်းရှင်တွေက စက်ရုံအလုပ်သမားတွေလုပ်ငန်းပိုတွင်ကျယ်စေဖို့ ဆုပေးဒဏ်ပေးစနစ် အသုံးပြုတာ ရလဒ်ကောင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေတာ တွေ့ရတယ်။
(၂) Stick to your guns
Stick ကို ဒီနေရာမှာ verb (ကြိယာ) အဖြစ် သုံးထားတာဖြစ်ပြီး ကပ်တာ၊ အနားကမခွါဘဲနေတာ၊ ဆက်ပြီးကိုင်ထားတာလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ To (သို့)၊ your (သင့်ရဲ့ )၊ guns (သေနတ်တွေ) ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကသေနတ်တွေကိုဆက်ပြီး မြဲမြဲကိုင်ထားပါ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးဆင်းသက်လာတာကတော့ စစ်သင်္ဘောတွေမှာ သေနတ်တွေ၊ အမြှောက်တွေကိုပစ်ဖို့ တာဝန်ချထားတဲ့ သင်္ဘောသားတွေအနေနဲ့ သင်္ဘောကို ရန်သူတွေက တိုက်လာတောင်မှ ကိုယ့်တာဝန်ကျတဲ့နေရာကနေ စွန့်ခွါထွက်မပြေးဘဲ ဆက်စောင့်နေရတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်က ဘယ်သူ ဘာပြောပြော၊ အခက်အခဲ ဘယ်လိုပင်ရှိပါစေ၊ ပြဿနာတွေဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရပါစေ၊ ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်၊ ရပ်တည်ချက်ကို ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲ စွဲကိုင်ထားတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ခေါင်းမာတဲ့သဘောမျိုးလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနှင့်ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
The farmers who were protesting stuck to their guns and refused to obey the police’s order.
ဆန္ဒပြလယ်သမားတွေက ရဲကပေးတဲ့ အမိန့်ကို လက်ခံဖို့ ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး၊ သူတို့ ရပ်တည်ချက်ကို အခိုင်အမာ စွဲကိုင်ခဲ့ကြတယ်။
(၃) Get the wrong end of the stick
Get (ရတာ)၊ the wrong (မမှန်တာ၊ မှားတာ)၊ end (အဆုံး)၊ of the stick (တုတ်ရဲ့ ) ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က တုတ်ရဲ့  အဆုံးပိုင်းကို မှားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တုတ်မှာ ထိပ်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်း ရှိရာမှာ ထိပ်ပိုင်းကနေ ကိုင်ရမယ့်အစား အောက်ပိုင်းကို ကိုင်မိတဲ့ သဘောမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အခြေအနေတခုခုနဲ့ ပတ်သက်လို့ အထင်မှားတာ၊ အယူအဆမှားတာ၊ တလွဲထင်တာ၊ မြန်မာမှာတော့ အမြီးမှန်း ခေါင်းမှန်းမသိ ဖြစ်တာမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒီအသုံးနှင့်ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Mary, you got the wrong end of the stick if you think I tried to lie to you.
Mary ရေ၊ ခင်ဗျားကို ကျနော် လိမ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့ထင်ရင်တော၊ ခင်ဗျား အထင်လွဲနေတာ ဖြစ်တယ်။
ဒီသတင်းပတ် တင်ပြပေးခဲ့တဲ့ Stick ကို အခြေခံတဲ့ idiom အသုံးတွေက Carrot and stick, Stick to your guns နဲ့ Get the wrong end of the stick တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။